La-yaab: Gabadhii 11 sano Ehelkeeda uga maqnayd Guriga Cid jaarkooda ah. | HimiloNetwork
Posted by: Himilo in La-yaabka June 19, 2021	0 82 Views
MUQDISHO (HN) — Haweeney sannadkii 2010-ka laga waayay gurigeeda ayaa 10 sano kaddib la ogaaday inay ku nooshahay guri deriska ah oo kii qoyskeeda u jirta 500 oo mitir. Waxayna kula nooshahay inankii ay is jeclaadeen.
Sajitha ehelkiisa waxay ku sigteen inay ka quustaan inantooda raadin iyo baadigoob dheer kaddib markii maalin ay isaga tagtay guriga. Waxay moodayeen inay dhimatay ama loola baxsaday meel fog oo aanay ogaan karin maskaxdoodana kuma soo dhicin inay ku noolaan karto guri jaarkooda ah.
Sida la ogaaday, gabadha oo xiriir jaceyl qarsoodi ah lala lahayd inan xaafadda ayaa ku heshiiyay inay gaarkooda ugu wada noolaan guriga agagaaraha madaama labada reer aysan guurkaas ku qanacsaneyn. Waxay jirtay 18 sano markii ay isaga tagtay reerka. Waxayna iyada iyo jaceylkeeda awoodeen inay si sir ah dhinac uga noolaadaan xaafadda.
Wax xog ah lagama helin wacaalkeeda. Waalidkeeduna ma fileyn inay xiriir jaceyl la yeelan karto qof xigto dhow la ah. Si kastaba, qof aqoon fiican u lahaa ayaa aqoonsaday heybteeda kaddibna si sir ah ula wadaagay booliska oo bilowgii sheekadooda ogaa; una ogolaaday inay si hoose u wada noolaan karaan madaama laba lammaane ay diin ahaan kala duwan yihiin ayna adag tahay in la isku ogolaado.
Sajitha oo la weydiiyay sida ay kalinimada ugu noolneyd qol yar muddada intaas la’eg waxay sheegtay inay ku nooleyd nolol is ilaalin iyo caburis badan. Mararka qaarna ayba ku adkeyd inay neecaaw macaan ku qaadato bannaanka hore ee aqalka ay ku jireen. Tiifiga unbaa saaxiib ii ahaa ayay tiri.
Goor lagu sigtay in la iska hilmaamo ayaa lagu baraarugay warkeeda iyo wixii ku dhacay oo ay la maqneyd intaan oo sannadood.
Previous: Maalinta Caalamiga ee La-dagaalanka Nabaadguurka iyo Abaaraha.
Next: La kulan: Halyayga lagu naaneyso Bogsiiyaha Lama-degaanka.